Ireo mpiara-monina feno zavakanto an-tanàn-dehibe izay hahagaga anao | Famoronana an-tserasera
Ireo mpiara-monina feno zavakanto an-tanàn-dehibe izay hahagaga anao
Cristina Zapata | | mpanakanto
Kianja feno sary hosodoko mahavariana, graffiti tsy azo atao, sticker na sary hosodoko feno hosodoko ... Iza no tsy talanjona tamin'ny zavakanto an-tanàn-dehibe rehefa mandeha am-pahanginana mamaky tanàna manodidina na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao?
Ary io dia, zavakanto an-tanàn-dehibe, kanto an-dalambe na Street Art mameno ny arabe saika ny tanàna rehetra eto an-tany. Tsy ara-dalàna sy amin'ny ankapobeny miaraka amina hafatra politika, io karazana fitakiana io dia noraisin'ireo mpanakanto maro ho fanoherana.
Avy eo isika dia hahita ireo tanàna manodidina kanto izay nanjary malaza indrindra noho ny fananana ireo kanto kanto maimaimpoana sy azon'ny rehetra idirana. Ho hitantsika ihany koa ireo mpanakanto malaza amin'ity sehatra ity.
1 Faritra manodidina an'i Lisbonne
2 Telozoro Baltika any Liverpool
3 Ny manodidina an'i Bushwick any New York
4 Banksy, mpanakanto an-tanàn-dehibe par tsara indrindra
Faritra manodidina an'i Lisbonne
Lisbon, renivohitra Portiogey, dia malaza amin'ny làlan'ny Street Art, izay mahasarika mpanakanto nasionaly sy iraisam-pirenena marobe. Ny Huffington Post dia efa nahita an'i Lisbonne ho iray amin'ireo ivon-toerana lehibe manerantany hamoronana tanàna. Ka ny tanàna manana Gallery of Urban Art (GAU) aza izy io, izay mifehy ny zavatra rehetra manodidina ity olana ity. Ary, ao anatin'ny làlana, manasongadina toerana an-tanàn-dehibe ara-dalàna amin'ny famoronana zavakanto an-dalambe, ny Hall of Fame of Amoreiras. Izy io dia faritra iray ao an-tanàna izay misy rindrina ahafahan'ny mpanakanto tsirairay mampivelatra ny fahaizany mamorona, amin'ny fepetra aorian'ny herinandro na volana vitsivitsy, miankina amin'ny asa, ny mpanakanto hafa dia afaka mamorona eo amboniny. Izy io dia zavakanto tsy maharitra, izay manova sy mampifanaraka ireo hafatra samihafa ampitaina ao anatin'ny fotoana iray. Ny zavatra tsara momba an'io dia isaky ny mitsidika ilay toerana ianao dia tsy hitovy mihitsy.
Telozoro Baltika any Liverpool
Ity manodidina ity dia heverina iray amin'ireo maoderina indrindra eto an-tanànan'i Liverpool, toerana nahaterahan'i The Beatles. Feno zavakanto an-dalambe, misy ihany koa ny làlana hankafizanao azy. Ao amin'io no ahitantsika sary an-drindrina tsy hita hatraiza hatraiza, fa koa ireo magazay manokana amin'ny vokatra ho an'ny fampandrosoana graffiti sy teknika hafa, ary koa habaka fampirantiana ho an'ny artista an-tanàn-dehibe. Ny faritra mahafinaritra sasany dia ny Oldham Place, Parr Street, Lost Hills na ny lalana Jamaica. Azo antoka fa mahazatra anao ny sangan'asa amin'ireo arabe ireo, satria malaza manerantany ny sasany.
Ny manodidina an'i Bushwick any New York
Na eo aza ny iray amin'ireo tanàna mahantra indrindra any New York, ity faritra ity gaga izahay amin'ny habetsaky ny kanto an-dalambe ananany. Any avaratra atsinanan'i Brooklyn, dia tanàna feno trano fitehirizam-boky izy io indray mipaka. Fa ny fandalinana ao anatiny dia afaka mahita galeriana sy magazay kanto maro isika. Gaga anao ny mpanakanto ao aminy.
Banksy, mpanakanto an-tanàn-dehibe par tsara indrindra
Raha misy mpanakanto an-dalambe izay nandresy tamina taona vitsivitsy lasa noho ny hafatra politika manesoeso azy ary valifaty izay, tsy isalasalana, Banksy. Ny tena tsy fahita amin'ity artista britanika ity dia ny maniry ny tsy hitonona anarana tanteraka. Na eo aza izany dia vitany ny namoaka boky marobe izay anehoany ny sanganasany manerantany, anaovany horonantsary fanadihadiana, Fivoahana amin'ny alàlan'ny fivarotana fanomezana (Voatendry ho Oscar izy) ary nampiranty ny sangan'asa tamina galeriana zavakanto isan-karazany aza, izay nidirany nisaron-doha sy nanantonana ny sary hoso-doko tamim-pahatoniana.
ny andian-teny enigmatika malaza amin'ny rindrin'i New York Asan'ity artista amerikana tara farany ity izy ireo. Na i Andy Warhol aza dia nangataka azy handray anjara tamin'ny zavatra noforoniny. Ankehitriny dia sarobidy tokoa ny sangan'asany, amidy amina dolara an-tapitrisany maro.
Mpanakanto anglisy izay manao fampisehoana sary hoso-doko telo lehibe mahavariana misy sola. Izy io dia afaka mamorona sary tena misy sy sary an-tsaina amin'ny alàlan'ny fandavana ny lalàn'ny fomba fijery. Izy io dia zavakanto tsy maharitra, satria ny tsaoka dia voafafa amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana amin'ny arabe sy ny toetr'andro. Nanjary nalaza eran-tany izy io noho ny Internet sy ny tambajotra sosialy.
Ankehitriny, isaky ny mandeha mamaky ny tanànanao na toeran-kafa ianao, dia aza hadino ny mijery ny kanto manarona na dia ny zoro kely indrindra aza, satria misy hafatra handefasana anao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo mpiara-monina feno zavakanto an-tanàn-dehibe izay hahagaga anao
Teknika fototra hanehoana ny fahaizanao feno amin'ny fandokoana loko watercolor
The Illustrator mpahay siansa: fototra iankinan'ny fahazoana siansa